नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको अध्यक्षमा डा. श्रेष्ठ नियुक्त • Health News Nepal
काठमाडौं , १२ श्रावण
सरकारले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको रिक्त अध्यक्ष पदमा डा. मोहन कृष्ण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छ्न । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहमति जनाउँदै डा . श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस अघि डा . श्रेष्ठ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका र नेपाल राष्टिय जनस्वास्थ्य संघको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुन् ।
उनी तीलगंगा आँखा अस्पतालमा व्यवस्थापकको रुपमा पनि कार्यरत छन् । परिषदमा अध्यक्षको कार्यकाल तीनबर्षको हुनेछ ।